crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Dhanbaallada | HimiloNetwork
Himilo May 18, 2020	Leave a comment 2,770 Views
Niyadsamida jaceylkana waligaa ha naafeyn.Naruuradii kalgacalkiyo halka aad nacab wareentay nabarro ayaa ku yaal.Xuural-ceyntii dunidee daawashada u timidayee, Daa’uus la mood.In kastoo aad nuugtana, kuma naaxdid dherigii nabsi uu dul yaal.Ammaantaada inan yahay in yar baan ka sheegay. Maxaan kuugu asteeyaa Allaa kuu dhameeyee?Dhabtii miyaan dhaqaaqaa, miyaan dhuuni quutaa, dhadhanshaa anfacada, sida labada dhaban iyo dhafoorada aan u heystaa waagu ...
Himilo May 18, 2020	Leave a comment 1,983 Views
Sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheego dunida.Mahiigaan da’aayiyo dirir hooray baa tahay. Dawadii jaceylkiyo dooqaygi baa tahay.Maxaan kaaga baaqdaa ama aan kaaga baaqdaa sow layma kaa badin.Marka aad i deeqdee quruxdaada daawaday, qalbigaa i dararoo indhahaa kugu diirsada.Runtu waxay tahay Ruuneey la’aantaa ribix maleh adduunyadu.Hablo kula siman baa jira oon sidaa u eegine, waa su’aale kaligaa ...
Himilo May 18, 2020	Leave a comment 1,485 Views
Dhib malahan sida fog oo aad iiga dheeraato, waxaad aalaaba ku negaan doontaa qalbigayga.Nolosheenna aayaha, Allow nabad ku waarnaa.Waxaa tahay diirrimaadka laabtayda.Waligaa ha is doorinin. sidaan ayaan kuugu jeclahay.Uma baahni qof sare. Kaliya inaad dhinacayga ahaato ayaa ah waxa iigu qaalisan nolosha.Raaxadii adduunkaay, reer aan yagleelnee, labadii isku raysiyo isku ruux ma noqonaa?!Waxaa tahay naq iyo doog, neecaw udgoon leh.Durdurada ...
Himilo May 18, 2020	Leave a comment 842 Views
Waxaa tahay qofka noloshayda ku habboon.Waxay dhaheen jaceylku dhaawac ayuu sitaa. Laakiin diyaar ayaan u ahay inaan halistiisa u bareero. marba haddii aan adiga kuugu danbeyn doono.Go’aankii ugu habboonaa oo aan gaaro waa inaan adiga ku doortay. Haa adiga oo kaliya.In igu filan kama dhihin jaceylkaada. Waxaan doonayaa inaad ila ogaato inaan ku jeclahay.Waxaan ahay qofka adduunku ugu nasiibka badan ...
Himilo May 18, 2020	Leave a comment 476 Views
Hilow aan dhamaaneyn ayaan kuu qabaa.Madoonayo inaad iga tagto. Cabsi darteed oo aan ka baqayo inaan ku waayo.Waxaan rabaa inaan ilbiriqsina ku moogaan. Diidmo aan dhabiilayo inaad iga dheeraato.Ma ogaan kartid diirrimaadka uu qalbigaygu ku sugan yahay marka aan adiga kula joogo.Wax walba ayaad iiga dhigan tahay.Waxa aan gebi ahaanba u baahanahay waa adiga oo kaliya.Markii ugu horreysay oo aan ...
Himilo May 18, 2020	Leave a comment 563 Views
Haddii aad ii jeceshahay sida aad ii sheegtay, fadlan ilaali qalbigayga. Waad qaadan kartaa. Ha iga jabin oo kaliya.Ha u ooyin qof aan isagaba kuu ilmeyn doonin.Inay laan kula soo jabto lugna kaa jabto ayaa dhaanta in jaceyl kugu beermo laabtuna kaa jabto.I jeclow kadibna adduunyada anigaa iska leh.Waxaan kugu jeclahay ma ahan oo kaliya qofka aad tahay. Balse qofka ...
Himilo May 18, 2020	Leave a comment 393 Views
Waxaan isku dayayaa inaan kuu abuuro farxad iyo kalsamaan.Ma isiinaysaa fursadda aan kugula wadaagi karo nolosha?Neecaw da’aysiyo nagaad lagu ildoogtaay: utintiyo nitaaqada waa u naafo caashaqa.Gabban maayo aniguye; adaan kuu go’ee adna ii garaab.Hagaarto nabad iyo naxariis midda aan ifka inta haween ku nool ugu jeclahay. Tii i bartay nolosha iyo qiimaha dadnimada.Tii iga saartay dhalanteedka iina saartay dhab ahaanta ...
Himilo May 18, 2020	Leave a comment 650 Views
Hal mid ayaan hubaal u heystaa. Waad u qalantaa in lagu jeclaado.Kii ku helaa nasiib leh.Markii ugu horreysay oo aan ku arko ayaan jecleystay inaan kusoo biiro noloshaada.Waxaa tahay gabadhii iigu qaalisaneyd oo aan abid la kulmo.Waxaa tahay qofkii ugu horreeyey ee i baray jaceylka waxa uu yahay.Waxaan kaaga mahad celinayaa inaad fursad ii siisay inaan ku jeclaado.Ma moogi mana ...
Baraha Bulshada oo dilaya Geedkii Keli-noole ahaa ee bartanka biyaha dhaca + Sawirro.
Ciriiriga Caasimadda Xal haloo helo!